जनताको नेतृत्व गर्न सक्ने - Pradesh Today
कोरोना महामारीमा ‘सहयोगी’ यी पात्र
प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ विपद्
लगानीकर्ता जुटे पूर्वाधारमा प्रदेशको सहयोगः मन्त्री चौधरी
टिप्पर सञ्चालनमा रोक
सहजकर्ताहरूका लागि अभिमूखीकरण
Homeविचारजनताको नेतृत्व गर्न सक्ने
जनताको नेतृत्व गर्न सक्ने
आगामी मंसिर १४ गते दाङसहित देशका ३७ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीयतह गरी ५२ रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँ्रदैछ । उपनिर्वाचन हुने जिल्ला तथा क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी बढिसकेको छ ।
दाङमा क्षेत्र नम्बर ३ को २ मा प्रदेश सभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका–१६ मा वडा अध्यक्षको पद गरी दुई पदमा लागि आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुन लागेको छ ।
उपनिर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा कुन उम्मेदवारले बाजी मार्लान् त ? आम चासोको विषय बनेको छ । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारको आ–आफ्नै दाबी छ म नै जित्न सक्छु । जिल्लामा अहिले प्रदेशसभाका लागि १२ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र गरी १४ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । चुनावको मिति नजिकिदै जाँदा दलहरूले उम्मेदवार छनौटसँगै चुनावी गतिविधि सक्रिय बनाउँदै लगेका छन् ।
विषेशगरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका उम्मेदवारबीच नै बढी प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन गरिएको छ । साना दलहरूले पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि चुनावी गतिविधि सक्रिय बनाउन थालेका छन् भने नागरिक कस्ता उम्मेदवार छनौट गर्ने भन्ने सोंचमा छन् । कुनै दल विषेशभन्दा पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मत दिने दाउमा नागरिक छन् ।
प्रतिनिधि चुन्ने सुनौलो अवसरलाई चिन्दै नागरिक हाम्रोभन्दा पनि राम्रो उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ मंसिर १४ को उपनिर्वाचनमा मत दिने दाउमा छन् । मंसिर १४ को मिति नजिकिदै जाँदा नागरिकले कस्ता उम्मेदवार छनौट गर्ने सोंचमा छन् त ?
के यो निर्वाचनमा दक्ष र निस्वार्थरूपमा नागरिकको सेवा गर्ने प्रतिनिधि छनौट होला त ? उपनिर्वाचनबारे नागरिकको धारणा के छ त ? पार्टी र शक्तिलाई तोड्दै मतदान होला त यसपालि ? मतदानमा सहभागी हुन पाउने केही मतदातासँग गरिएको कुराकानी राउण्ड टेबलको आजको अंकमा सारसंक्षेप ।
तुलसीपुर–१ पोखरी टोल, दाङ
म पहिलो पटक भोट हाल्दैछु । बिगत लामो समयदेखि म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण पनि नेतृत्व छनौट गर्ने अवसर पाएको थिएन् । अहिले पहिलो पटक दिन लागेको भोट पक्कै पनि सक्षम र निष्पक्ष नेतृत्व छनौटमा पर्नेछ ।
मैले कुनै नाता पार्टीलाई हेरेर भोट दिने छैन् । अहिले पछिल्लो समय नेतृत्व छनौटमा नाता र पार्टी भनेर नै बिग्रिएको हो । यि कुराको सधै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोंच छ । म विषेशगरी टोलको पनि अध्यक्ष भएको नाताले म मात्रै नभएर मेरो टोलका सबैलाई सक्षम र योग्य व्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना दिने कोसिस पनि गर्ने छु ।
यसभन्दा अघि मैले भोट नदिएपनि घरपरिवार र आफन्तले भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिले पनि केही गर्नुभएको विस्तारै हाम्रा आकांक्षा पूरा हुन थालेका छन् ।
अहिले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई छनौट गर्नेछौँ हामीले जसले समाज र राष्ट्रको लागि केही गर्छु भन्ने सोच बोकेको छ । चुनाव जितेर गएपछि व्यक्ति जीवन परिवर्तन हुने तर जनताको जीवन परिवर्तन हुने कमै देखिने गरेको छ ।
हामीले सादा जीवन उच्च विचार बोकेका प्रतिनिधि चाहेका छौँ । जनतासँग गरेका प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्नका लागि सदैव सेवामा खटिरहने प्रतिनिधि हामीलाई मात्र होइन् देशलाई ने खाँचो छ अब । गाउँमा सडक कालोपत्रेका योजनाहरूलाई निरन्तता दिने, खानेपानी शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीलगायतका कुरालाई ध्यान दिने नेतृत्व चाहिएको छ ।
Uma Bhandari - June 20, 2021
विचार June 20, 2021
फिचर June 20, 2021
समाज June 20, 2021